Madaxwaynaha DDSI Oo Casho-Sharaf U Sameeyay Ardayda U Dhalatay DDSI Ee Wax Kabarata Caasimada Bangkok. - Cakaara News
Bangkok(CN) Arbaco.19.Nov.2014, sida aad wararkii hore kala socoteen Shabakada CakaaraNews Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maalintii Jimcaha ee lasoo dhaafay u ambabaxay dhinaca wadamo katirsan qaarada Aasiya kuwaas oo uu madaxwaynuhu u tagay istaratiijiyado horumarineed.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud iyo qorshayaasha horumarineed ee socdaalka dalalka Asiya ayaa waxaa intaas u dheer kulamo uu laqaadanayo ardayda iyo aqoonyahanada u dhalatay DDSI ee kusugan wadamadaasi waxuuna xalay madaxwaynuhu lakulmay casho sharafna u sameeyay ardayda u dhalatay DDSI ee wax kabarata caasimada Bangkok ee wadanka Thailand ee konfurta-bariga Asia.
Madaxwaynaha oo ay wahelinayeen wasiirka dakhliga DDSI mudane Axmed Maxamed Shugri iyo wasiir kuxigeenka qurbajoogta DDSI mudane Cabdi Khaliif Buraale (Dhoonbe) ayaa ugu horayntii aad uga mahad celiyay dadaalka ay ardayda u dhalatay DDSI ugu jiraan waxbarshada iyo balaadhinta cilmiga aqooneed ee ay ka dhiganayaan wadamadaasi Asiya. Wuxuuna madaxwaynuhu uga warbixiyay ardayda heerka uu maanta deegaanku marayo iyo isbadalka horumar ee lagaadhay ee lagu hantay dadaalka dheer oo ay kamid tahay ladagaalanka jahliga, isagoo sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay lakulanka ardaydan oo uu tilmaamay in ay yihiin cudud iyo maskax dalka iyo deegaankaba u maqan.
Dadaalada waawayn ee ay ku mashqqulsantahay xukuuumada DDSI ee lagula dagaalamayo saboolnimada ayaa waxaa kamida tirtirida jahliga iyadoo ay subax waliba 1.3 milyan oo arday ah ay u kalahaan duruusta iyo iskuulaadka.
Sidoo kale ardayda oo ay ugu horeeyaan Xasan Badri Maxamed, Mubaarak Muxumed iyo C/wahaab Maxamed ayaa aad u soo dhawaysay socdaalka madaxwaynaha iyo isbadalka uu deegaanku maanta marayo iyagoo dhankoodana balan qaaday in ay maskaxdooda uga faaiidayn doonaan wadankooda Itoobiya.
Socdaalada gudaha iyo dibada ee madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxaa bartilmaameed u ah xidhiidhka dadwaynaha, lakulanka iyo wadatashiga dhamaan qaybaha kala duwan ee ummada u dhalatay dalka iyo deegaanka, taasoo door muhiima kaqaadatay horumarka iyo isbadalka ay maanta gaadhay DDSI iyo guud ahaanba dalka Itoobiya.